मानिसको नाकभित्र हुने सिगान किन छ आवश्यक ? जानी राखौ
सोमवार, अप्रील 19, 2021
अगस्ट 23, 2019 अगस्ट 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment	नाक, सिगान
मानिसको नाकभित्र हुने सिगान किन छ आवश्यक ? मानव शरीरको कुनै पनि अङ्गको नाम लिनुहोस, त्यसको कुनै न कुनै कार्य अवश्य हुन्छ । यतिसम्म कि, नाकभित्र हुने सिगानको पनि आफ्नै विशिष्ट कार्य छ । नाक मानिस वा जनावरले गन्ध थाहा पाउने र श्वास फेर्न प्रयोग गर्ने अङ्ग हो। नाक हाम्रो शरीरभित्र हावा छिर्ने बाटो हो । तर हाम्रो शरीरभित्र छिर्नुभन्दा पहिले हावालाई तातो पार्ने र हावामा रहेका धुलाका कणहरूलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । नाकमा रहेका रौँहरूले केही मात्रामा धुलो रोक्ने काम गर्छ । साथै नाकदेखि फोक्सोसम्म पुग्ने श्वासनलीको भित्तामा पनि थुप्रै स-साना रौँहरू हुन्छन । यी रौँहरूलाई सिलिया भनिन्छ । हाम्रो नाकभित्र वास्तवमा पारदर्शी सिगान हुन्छ । तर हामीले सास फेर्ने हावामा रहेका धुलोका कणहरू सिलियाले रोक्छ र यी कणहरू सिगानसँग मिसिन्छ । यसले गर्दा सिगान बाक्लो र अपारदर्शी हुन जान्छ ।
हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा धूलोका लाखौँ कणहरू हुन्छन । तपाई जतिसुकै सफा सहरमा या गाउँमा अथवा जङ्गलमै बसिरहनुभएको भएपनि तपाईले सास फेर्ने बेला धूलोका लाखौं कणहरू नाकबाट भित्र छिरिरहेका हुन्छन । धूलोका कण विनाको हावा पाइने स्थान भनेको जमिनबाट १००० किलोमिटर परको समुन्द्री सतह मात्र हुन्छ । हामीले सास फेर्दा धूलोका कणहरू मात्र नभई लाखौं ब्याक्टारियाहरू पनि नाकभित्र छिर्छन । तर सिगानमा एन्टिसेप्टिक भएको कारण यीमध्ये थुप्रै ब्याकटेरियाहरू सिगानसँग मिसिएपछि नष्ट हुन्छन् । त्यस्ता धुलोका कणहरू र ब्याक्टेरियाहरू सिगानसँगै बाहिर आउछन । त्यसैले पनि कहिले काँही रूघाँ लाग्नु फाइदाजन नै हुन्छ । सिगान भनेर घिन नमानौँ यो हाम्रो शरीरमा रहेर हामीलाई स्वस्थ राख्न ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
← स्वस्थ तथा निरोगी हुन यसरी पालना गरौ प्राकृतिकको नियम
यी चार राशी भएका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई गर्छन् अत्यन्तै माया →
One thought on “मानिसको नाकभित्र हुने सिगान किन छ आवश्यक ?”
Pingback:	यस्ता छन् कहिलेकाहीं किन हातखुट्टा निदाउँने कारणहरु, जानी राखौ
घरमा यो दिशामा दियो बाल्नुहोस आयु बढ्छ